*Speak from My Heart*: မွန်းကျပ်မူ့ ကို ဖောက်ထွက်လို့ 
Great post,,,,visited and enjoyed it. Credit to your life's experience sharing with us.
ဘာတွေ ဖြစ်နေလဲ ညီမလေးရေ...
အစစ အဆင်ပြေပါစေနော် :)
လူတိုင်းနီးပါး ခြလူတန်းစားမှတပါး ဒီလိုခံစားနေရတယ်ဆိုရင် လွန်မလား
မကြိုက်ဆုံးက မြန်မာအချင်းချင်းမြင်ရင် မြန်မာသံမထွက်နဲ့လို့ပြောတာကိုအမုန်းဆုံးဘဲ
စိတ်မကောင်းဘူး ကိုယ့်မယောဂမကင်းသလို ခံစားရတယ် ။ အဆင်ပြေပါစေ မယ်စောရေ။
တစ်ချို့ မြန်မာစကားပုံကို ကောက်ရခက်တယ် စောရေ။
'တစ်ရွာမပြောင်း သူကောင်းမဖြစ်' တဲ့။
'သေချင်တဲ့ကျား တောပြောင်း' တဲ့။
ဘယ်ဟာကို ရွေးရင် မှန်မယ်မသိဘူးး) စိတ်ဓာတ်အစဉ်ကြည်လင်အေးမြပါစေကွယ်။